Jesus war nicht allein | Weltweite Kirche Gottes Schweiz | Weltweite Kirche Gottes Schweiz - Weltweite Kirche Gottes Schweiz
ဆောင်းပါး > သားအ > ယရှေုသညျတစျယောကျတညျးမဟုတျဘူး
ဂျေရုဆလင်မြို့ပြင်ရှိသဲကန္တာရတောင်ကုန်းပေါ်ရှိလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်ပြakerနာတက်သူတစ် ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ သူတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး ထိုနွေ ဦး ရာသီတွင်ဂျေရုဆလင်၌သူသည်တစ် ဦး တည်းသောဒုက္ခပေးသူမဟုတ်ပါ။
“ငါသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံခဲ့သည်” ဟု တမန်တော်ပေါလု ရေးသားခဲ့သည် (ဂလာတိ 2,20) သို့သော် ပေါလုသည် တစ်ဦးတည်းမဟုတ်ပေ။ “သင်တို့သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ အသေခံတော်မူသည်” ဟု အခြားခရစ်ယာန်များကို ပြောခဲ့သည် (ကောလောသဲ 2,20) “ကျွန်ုပ်တို့ကို သူနှင့်အတူ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းခံရသည်” ဟု ရောမတို့ထံ ရေးခဲ့သည်။ (ရောမ၊ 6,4) ဒီမှာ ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ ဤလူအားလုံးသည် ယေရုရှလင်မြို့ရှိ ထိုတောင်ကုန်းပေါ်တွင် မရှိခဲ့ပါ။ ဒီနေရာမှာ ပေါလု ဘာပြောနေတာလဲ။ ခရစ်ယာန်အားလုံးသည် သိသည်ဖြစ်စေ မသိသည်ဖြစ်စေ ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ ပါ၀င်သည်။
ယေရှုကိုကားတိုင်တင်ချိန်၌သင်ရှိခဲ့သလား။ သင်သည်ခရစ်ယာန်တစ် ဦး ဖြစ်ပါကအဖြေမှာဟုတ်သည်၊ သင်ထိုတွင်ရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်တို့မသိခဲ့သော်လည်းသူသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ ဒါကအနတ္တလို့ထင်ရလိမ့်မယ်။ အမှန်တကယ်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ မျက်မှောက်ခေတ်ဘာသာစကားတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုကိုခွဲခြားသိမြင်ကြောင်းပြောလိမ့်မည်။ သူ့ကိုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လက်ခံသည်။ သူ၏အသေခံခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်ပေးဆပ်မှုအဖြစ်လက်ခံသည်။
ဒါတွေအားလုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့လည်း လက်ခံ၍ စားသုံးကြသည်။ “ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို သူနှင့်အတူ ထမြောက်စေတော်မူ၏။” (ဧဖက် 2,6) ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏နံနက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုနေရာတွင်ရှိနေခဲ့သည်။ “ဘုရားသခင်သည် သင့်ကို သူနှင့်အတူ အသက်ရှင်စေတော်မူသည်” (ကောလောသဲ၊ 2,13) “သင်တို့သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ထမြောက်ပြီ” (ကောလောသဲ၊ 3,1).
လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံတော်မူသောသခင်ဘုရားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်ခံရန်သဘောတူလျှင်ခရစ်တော်၏ပုံပြင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသည်သူ၏ဘ ၀ နှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏ဘုန်းသာမကသူ၏ကားတိုင်တင်သတ်ခြင်း၏နာကျင်မှုနှင့်ဆင်းရဲခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည်။ သင်လက်ခံနိုင်မလား ငါတို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူသေလျှင်၊ ထိုအရာကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူနှင့်အတူဘုန်းအသရေရှိလိမ့်မည်။
ယေရှုသည်သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမျှသာမဟုတ်ပါ။ သူသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၏ဘ ၀ ကိုရှင်သန်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တကယ့်ကိုမပြည့်စုံပါ။ တဖြည်းဖြည်းစုံလင်ခြင်းပင်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ခရစ်တော်၏ပြည့်လျှံနေသောဘဝသစ်တွင်ပါဝင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ရှင်ပေါလုကဤသို့ရေးသားခဲ့သည်မှာ“ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဘုန်းတော်အားဖြင့်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်နည်းတူငါတို့သည်လည်းအသစ်သောအသက်တာ၌လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်သေခြင်း၌ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့်သူနှင့်အတူမြှုပ်နှံခြင်းခံရသည်” သူနှင့်အတူသင်္ဂြိုဟ်ခြင်း၊
ဒီဘဝသစ်က အခု ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲ။ “ထို့အတူ သင်တို့သည်လည်း အပြစ်တရားကြောင့် အသေခံပြီး ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်၌ အသက်ရှင်ကြောင်းကို ယုံကြည်ကြလော့။ ထို့ကြောင့် အပြစ်တရားသည် သင်၏သေတတ်သောကိုယ်ခန္ဓာတွင် မအုပ်စိုးပါစေနှင့်၊ ၎င်း၏အလိုဆန္ဒများကို မလိုက်နာပါနှင့်။ မတရားမှု၏လက်နက်အဖြစ် သင်တို့၏ကိုယ်အင်္ဂါများကို အရှုံးမပေးဘဲ၊ သေလွန်ပြီး ယခုအသက်ရှင်သောသူတို့ကဲ့သို့၊ ဘုရားသခင်ထံ၌ ကိုယ်ကိုကိုယ် အပ်နှံကြလော့။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုခရစ်နှင့် ခွဲခြားသိမြင်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသည် ကိုယ်တော်ဖြစ်သည်။ “အားလုံးအတွက် အသေခံရင် အားလုံးသေမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သူသည် လူတိုင်းအတွက် အသေခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ထိုနေရာတွင် နေထိုင်သော သူတို့သည် ယခုမှစ၍ သူတို့အတွက် အသက်မရှင်နိုင်ဘဲ၊ အသေခံပြီး သူတို့အတွက် ထမြောက်ခဲ့သော သူအတွက်” (2. ကောရိန္သု 5,14-15) ။
ယေရှုသည်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်တူညီမည်ဆိုလျှင်သူနှင့်အတူသင်္ဂြိုဟ်ခံရလိမ့်မည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဘ ၀ သစ်သို့ထမြောက်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသည်ကိုယ်တော်နှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုများနှင့်အောင်မြင်မှုများတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိသည်။ သူက ၀ န်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုထမ်းပြီးသူသည်အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးသူ၏ဘ ၀ ကိုသူနှင့်အတူမျှဝေခြင်းမှ ၀ မ်းသာမှုခံစားရသည်။
ပေါလုက ယင်းကို ဤစကားများဖြင့် ဖော်ပြခဲ့သည်– “ငါသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံခဲ့သည်။ ငါအသက်ရှင်သော်လည်း ယခုငါမဟုတ်၊ ခရစ်တော်သည် ငါ၌ရှိတော်မူ၏။ ယခု ငါသည် ဇာတိပကတိ၌ အသက်ရှင်သည်ဖြစ်၍၊ ငါ့ကိုချစ်၍ ငါ့အတွက် ကိုယ်ကိုကိုယ်စွန့်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်း၌ အသက်ရှင်သည်" (ဂလာတိ၊ 2,20).
တပည့်တော်တို့အားယေရှုကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားပါ။ ငါနှင့်အတူနေပါလော့။ အသက်ဟောင်းကိုကားတိုင် တင်၍ ဘဝအသစ်ကိုသင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၌အုပ်ချုပ်ခွင့်ပြုပါ။ ငါ့အားဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခွင့်ပြုပါ။ ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေးမည်။